I-China Open Type Fibre Laser Cutting Machine Umkhiqizi kanye Nomthengisi | UGoo Hong
Vula uhlobo lwe-fiber laser cutting machine, wonke umshini usebenzisa i-rack ne-pinion drive system, eyenzelwe zonke izinhlobo zamashidi wensimbi. Kulula ukuthi abasebenzisi basebenze futhi banakekele. Ngasikhathi sinye, inqubo yomhlangano eqinile iqinisekisa ukusebenza okuzinzile komshini ngokunemba okuphezulu. Umshini wokusika we-fiber fiber we-Optical ohlinzeka abasebenzisi ngamandla wokusika nokusebenza kahle ngezinsiza ezisezingeni eliphezulu ezingenisiwe, okuyisinqumo esihle sabasebenzisi ukucubungula uhlobo lwezomnotho.
IKhabinethi Yokulawula Ezimele
Zonke izinto ezisebenza ngogesi nomthombo we-laser zakhelwe ngaphakathi kwikhabhinethi yokulawula ezimele ngomklamo wokuqinisekisa uthuli ukwelula isikhathi sempilo sezinto ezisebenza ngogesi.
IKhabhinethi yokulawula ifakwe i-air conditioner yokushisa okuzenzakalelayo okuqhubekayo.Lokhu kungavimbela ukulimala ngokweqile kokushisa kwezakhi ehlobo.
1.High ngokunemba ahlabayo
Isivinini 2.High nokusebenza kahle * Ukugcinwa okuphansi
Isimo se-4.Green nesiphephile sokusebenza
Iwaranti yeminyaka engu-5.3
Insizakalo yamahora angu-6.24 online
7.Life isikhathi technical support.
Langaphambilini Okuvalelwe Ngokugcwele I-Fiber Laser Cutting Machine
Olandelayo: Shintsha Ithebula le-Fiber Laser Cutting Machine
cnc umshini we-laser
i-fiber cnc laser
fibre laser izindleko
fibre laser bezihlahla
Umhlinzeki womshini wokusika we-fiber laser
umshini wokusika we-laser uyathengiswa
laser ahlabayo umshini izindleko
metal laser umsiki ukudayiswa
umshini omncane wokusika we-fiber laser